Trump oo lagu qaaday weerar rogaal celis ah – Madal Furan
Hoy > Warka > Trump oo lagu qaaday weerar rogaal celis ah
Trump oo lagu qaaday weerar rogaal celis ah
Editor August 24, 2018 0
Madal Furan – Xeer Ilaaliyaha Guud ee dalka Maraykanka Jeff Sessions ayaa ka jawaabay weerarkii u dambeeyay ee kaga yimaada Trump, isaga oo ku adkaystay in waaxda caddaaladdu aysan goradda u laadlaadinaynin caddaadis dhanka siyaasadda kaga yimaadda.
Arrintan ayaa soo cusboonaatay ka dib markii uu madaxweynaha Maraykanku sheegay inSessions uusan maamulin waaxda uu xukumo.
Trump ayaan la gabanin eedaymaha uu u jeediyo waaxda caddaaladda.
Waxaana si gaar ah uga caraysiiyay sida ay waaxdaasi u maaraysay baaritaanka lagu hayo in Ruushku uu farogaliyay Doorashadii Maraykanka ee 2016kii.
Sessions oo billawgii taageeray ol’olaha Trump ayaa dhinac uga istaagay baaritaankaas, si uu uga baaqsado in ay iska horyimaadaan masaaliixdiisa iyo baaritaankaas, wuxuuna hawshaas u idmaday ku xigeenkiisa Rod Rosenstein.
Go’aankaas uu qaatay Sessions iyo horumarka laga sameeyay baaritaanka uu wado Robert Mueller oo ah dambibaare khaas ah oo hadda la sheegay in uu eegayo in Trump uu carqaladeeyay caddaaladda ayaa horseeday in uu is hayn waayo madaxweyne Trump isaga oo afka iyo Twitterkaba adeegsanaya.
Madaxweynaha ayaa ku adkaysanaya in aysan wax wada shaqayn ah dhexmarin ol’olihiisii doorashada iyo dawladda Ruushka, wuxuuna diiday in uu iskudayay in uu carqaladeeyo caddaaladda.
Hadalladaas markay is dhaafsadeen ka dib, labo xubnood oo sarsare oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga ayaa muujiyay in ay taageeri doonaan Trump haddii uu damco in uu shaqada ka eryo Sessions wixii ka dambeeya doorashada xiliga dhexe ee Maraykanka ka dhacaysa bisha Nofembar.
Si kastaba ha ahaatee qaar kale oo ka mid ah xisbiga Jamhuuriga ayaa warbaahinta Politico u sheegay in ay la tahay in tallaabadaasi ay tahay mid xun ayna garab taagan yihiin xeer ilaaliyaha guud.
Ruushka oo si buuxda u aqoonsatay Xukumadda Golaha Militariga Sudan
JIRITAANKA DAWALDNIMO EE PUNTLAND 20 SANO KADIB WALAAC LAGA MUUJIYAY